Gandaki Sanchar » पण्डित बाजेकाे अाइटम गीत !
पण्डित बाजेकाे अाइटम गीत !
काठमाडाैं/ अाइटम डान्स राख्ने चलन नेपाली फिल्ममा जारी छ । पण्डित बाजेकाे लाैरीमै अाइटम डान्स समावेश गरिएकाे छ । चाेली तुना बाेलकाे उक्त गीतमा सन्ध्या केसीले ठुम्का लगाएकी छिन् ।
दीपक ओली निर्देशित फिल्म ‘पण्डित बाजेको लौरी’ अागामी साउन ४ गते रिलिज हुँदैछ । गीतमा फिल्मका मुख्य कलाकार मरिश्का पोखरेल, भोलाराज सापकोटा, प्रवीण खतिवडा, विजय बराल, प्रमोद अग्रहरि लगायतका कलाकार फिचर्ड छन् ।
कृष्ण केसीको शब्द, श्रीकृष्ण बम मल्लको संगीत, मीना निरौला/श्रीकृष्णकै स्वर र विक्रम स्वाँरको कोरियोग्राफी छ । फिल्मले एउटा सानो गाउँभित्र पण्डित्याइँको भिन्न-भिन्न काम गर्ने पण्डितहरुको कथा बाेकेकाे छ ।
महेश दवाडीको कथा/पटकथा/संवाद रहेको सिनेमाले वादी-वदिनीको प्रसंग पनि उठाएको छ । केहि दिन अगाडि सार्वजनिक टिजरबाट फिल्मले उत्साहजनक प्रतिक्रिया बटुलिरहेको छ ।
थमनकुमार भण्डारी (राज) र किशोर खड्काले संयुक्त लगानी रहेकाे फिल्ममा लोकेन्द्र लेखक, विशाल पहारी, कुलदीप अधिकारी लगायतको पनि अभिनय छ । ‘पण्डित बाजेको लौरी’मा विदुर पाण्डेको छायांकन, मित्र डि गुरुङको सम्पादन, विक्रम स्वाँरको कोरियोग्राफी र श्रीकृष्ण बम मल्ल/अमित श्रेष्ठको संगीत छ ।
प्रकाशित मिति १७ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १६:५४